Any Iràna, Mbola Takona Foana Ny Adin’ny Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2016 6:40 GMT
Repoblikan'i Mahabad Kiordistàna, taona 1946 Loharano: Wikimedia Commons
Ny volana May 2015, may i Mahabad, renivohitry ny faritra Kiorda Iraniana, raha niparitaka be ireo fitroarana sy hetsi-panoherana taorian'ny fahafatesana mahagagan'ilay tovovavy Kiorda tao an-tanàna. Nilaza ireo mpikatroka mafana fo fa nianjera avy teny ambaravarankelin'ny hotely izy ka maty raha nitsoaka andrana fanolanana nataonà Iraniana iray tomponandraikitry ny fiarovana . Nahasintona ny fijery iraisampirenena io zava-nitranga io ary lasa teboka fototra ho an'ny ady fampielezankevitra ara-politika sy jeografika.
Tsy hoe fisehon'ny hatezerana niangona tao amin'ireo vahoaka Kiorda fotsiny akory ireo fitroarana tany Mahabad ireo, fa fampahatsiahivana an'ohata ihany koa ny lelafo izay nirehitra hatry ny ela tao amin'ny tanànan'i Mahabad.
Ny taona 1946, lasa renivohitra tao anatin'ny fotoana fohy ho an'ilay repoblika Kiorda mahaleotena i Mahabad. Tsy naharitra ela ilay nofinofin'ny fahaleovantena, ary vetivety dia nopotehan'ny Shah-n'i Iràna ilay Repoblika, ny taona 1947, ary nahantona ilay mpitarika Kiorda, Qazi Muhammad, noho ny fihantsiana nataony.
Napetraka ny taona 1947 ny Repoblikan'i Mahabad Kiorda. Eo afovoany ny filoha Qazi Muhammad. Sary avy tamin'ny Wikimedia Commons, ampahany amin'ny sehatra ho an'ny daholobe.
Ankehitriny, mbola mijanona ho lasibatry ny fanjakana ihany ireo Kiorda mpikatroka mafana fo . Tao anatin'ireo taona maro nifanesy, am-polony no novonoina noho ny fifandraisany tamin'ireo vondrona Kiorda mpanohitra. Ny volana Aprily 2016, nifandona tamin'ireo mpitolona Kiorda ny Hery Mpiambina Revolisionera Iraniana. Ireo mpikambana ao amin'ny PDKI (Antoko Demokratikan'i Kiordistàna Iraniana), ilay fikambanana naorin'i Qazi Muhammad tao Mahabad ny taona 1945, no ankamaroan'ireo maty.
Namela maty am-polony tamin'ireo mpikamban'ny Hery Mpiambina Revolisionera sy ireo mpitolona Kiorda ilay fifandonana, ary namelona indray ny afon'ny ady mitam-piadiana tao amin'ny Kiordistàna Iraniana. Mino i Mohammed Saleh, mpisolo tena ny PDKI any Erbil, Iràka, fa tsy safidy ho an'ireo Kiorda Iraniana akory ny fifandonana mahery setra fa zava-misy tena iainana. Taminà tafatafa natao tamin'ny imailaka, nanoratra i Saleh fa “jadona ara-pivavahana mahery fihetsika ny rafitr'i Iràna. Tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mamaly bontana izahay. Tsy misy sehatra ifampiresahana ara-politika amin'ny jadona teokratikan'i Iran. Io no hany làlan-tokana afaka hamalianay bontana. Io ny zonay.”
Na teo aza ny fifanohanana fohy teo amin'ireo Kiorda sy ny Tandrefana, mbola tsy mitovy ny fanekena maneran-tany ireo zon'ireo Kiorda, na hoe tsy misy mihitsy aza amin'ireo resaka mandeha. Tantara izay mahatonga ireo lohatenim-baovao iraisampirenena matetika hiresaka toy izao: Fifandonana Kiorda miaraka amin'ny ISIS any Syria, fitomboan'ny fanjakazakan'ny Kiorda any Iràka, ary ny fanoherana efa ho 40 taonan'ny Kiorda any Torkia.
Nahoana ireo Kiorda Iraniana no mbola takona foana?
Mbola mijanona tsy raharahian'ny vondrona iraisampirenena ihany ireo Kiorda ao Iràna—vahoaka matanjaka 6 tapitrisa — na teo aza ireo hetsika mafy nataony sy ny fisehoany.
Ava Homa, Kiorda Iraniana mpanoratra sy mpanao gazety mipetraka any Etazonia, milaza fa ny fivoarana vitan'ireo Kiorda, indrindra tao amin'ny faritany Rojava any avaratr'i Syria, dia sady maneho ny mety hisian'ny fiovàna tsara ao amin'ny faritra, ary ny fandinihana tranga iray momba ny Fihatsarambelatsihin'ny Tandrefana.
“Mifototra amin'ny tombontsoa ny fanapahankevitr'izy ireo, fa tsy amin'ny ara-drariny,” hoy i Homa amin'ny fanohanan'ny Tandrefana ny Kiorda, tamin'ny tafatafa tamin'ny antso an-telefaona. Mbola olana lehibe ny fanajana ny zon'olombelona ho an'ireo Kiorda any Iran, nanipika izao i Homa: “Ny taona 2015, 93 ireo olona nampangaina ho Moharebeh [tezitra amin'Andriamanitra], Kiorda ny 63 isa amin'izy ireo.”
Tsy misy miraharaha loatra ny antony iadian'ny Kiodra any Iràna. “Tsy miaiky ireo antony fitiavam-pirenena'ireo Kiorda ireo lazaina ho mpikatroka mafana fo Iraniana sy manam-pahaizana maro,” hoy Homa. “Ho azy ireo, heloka ny fangatahana ny fahaleovantena, ary tsy safidy ara-politika. Misy ilay fitiavana kokoa eo amin'ny tany sy ny fifikirana amin'ny faritany eo amin'ny olon-drehetra.”
Ho an'ireo kiorda any Iran, misy fototra lalim-paka ara-tantara ny fanoherana. Na efa niatrika fanovana maro aza ilay hetsika, mbola velona ihany io ankehitriny.
Mihoatra lavitry ny governemanta Iraniana, mbola manohy mampiseho fanamby vaovao hatrany ireo toerana ara-politika sy jeografika misy ilay faritra, tafiditra amin'izany ny avy amin'ireo antoko Kiorda mpiaradia. Ny volana May 2016, nandrahona ny hampipatitaka tanteraka ny firaisankinan'ny Kiorda ilay fifandonana nahafatesan'olona niteraka fahavoazana nisimisy ihany teo amin'ireo mpikamban'ny Antokon'ireo Mpiasa ao Kiordistàna (PKK)— izay niady tamin'ny governemanta Tiorka tamin'ny voalohany—sy ny PDKI.
Nilaza ny PKK fa tsy ho an'ny tombotsoan'ireo Kiorda akory ilay ady mitam-piadiana any Iràna, ary nankahery ny “fifantohana amin'ireo hetsika sivily sy ara-koltoraly” ho solon'izay.
Nitsikera io fomba fijery io i Mohammed Saleh mba handemena ny fanoheran'ireo Kiorda Iraniana, ary mba ho taratra amin'ny ankapobeny amin'ireo fiarahana miovaovan'ny PKK eo amin'ny faritra:
Manana mombamomba azy miavaka ny hetsika Kiorda, na any Iràna, Iràka, Tiorkia na Syria. Tsy miditriditra amin'ny adin'ny PKK any Tiorkia izahay, ary tsy tokony hiditriditra amin'ny adinay aty Iran ny PKK. Izany ny feon'ny vahoakanay. Miady ho an'ny antony iray izahay.
Nanazava ihany koa i Saleh fa sady fahafahana no sakana ho an'ny fanekena ireo Kiorda ho mpiara-miasa mitovy ho an'ny hoavin'ny faritra ireo fifandirana rezionaly any Syria sy Iràka:
Samy mahazo tombontsoa amin'ny lafiny sasantsasany ireo mpilalao rehetra tafiditra amin'izany, afa-tsy ireo Kiorda. Ary tsy miady ho an'ny fahamarinan-toerany manokana fotsiny ireo Kiorda. Fa manantena ny hitondra filaminana ho an'ny faritra manontolo izy ireo, ary afaka atao tsara izany satria mahatsapa tena ho tafiditra amin'izany izahay.
Ny tosik'ireo Kiorda Iraniana any amin'ny zanaka ampielezana
Ao an-tsain'ireo Kiorda Iraniana any am-pihelezana ihany koa ny ady ho an'ny fiovàna. Mino i Samira Ghaderi, Kiorda Iraniana ary olona to-teny teo aloha ho an'ny Governemanta Rezionaly Kiordistàna (KRG) any Washington DC, fa tsy anjara andraikitr'ireo mipetraka any Kiordistàna ihany ny fanindrahindrana fiovana. Taminà tafatafa an-telefaona, nilaza izao i Ghaderi:
Mahatsapa ho tomponandraikitra amin'ireo vahoaka Kiorda aho. Noho ny toe-javatra mampalahelo misy ankehitriny, mieritreritra aho fa andraikitr'ireo Kiorda rehetra sy ireo rehetra naman'ny Kiorda ny manaparitaka ny fahalalàna mikasika ny adinay efa nandritra ny an-jato taonany.
Andianà Vehivvy Mpiaro, 4 Aogositra 2015. Loharano: Wikimedia Commons
Iray amin'ireo tanora Kiorda any Etazonia izay nahita ny dikan'ny fahavitantena tamin'ny alalan'ny fitsanganana manoloana ireo olan'ireo Kiorda ary nanindrahindra ny anton'ilay ady, i Ghaderi:
Amin'ny maha-Amerikana-Kiorda. Fantatro fa nomena fahafahana izay afaka nofinofisin'ny ankamaroany fotsiny aho. Ary raisiko tena zava-dehibe izany.
Tsy mahagaga hoe vehivavy ny ankamaroan'ireo Kiorda mpikatroka mafana fo, na any Syria, Iràna na any ivelany. Araka ny nomarihin'i Ghaderi “Tao anatin'ny tantara, teo anoloan'ny ady natrehana hatrany ireo Kiorda vehivavy.”
Araka an'i Ava Homa, tsy maintsy niadian’ireo Kiorda vehivavy ny fanavakavahana sy ny fanosihosehana ataon'ny fanjakana, ny fanjakazakàn'ny olona iray ary ny fampisehoana mihoampampana ny fitiavan-tanindrazana tao amin'ny kolontsaina Kiorda, sady nataon'ny Tandrefana ho zavatra tsy fahita firy:
Na tian'ny Tadrefana ahindrahindra aza ny adin'ireo Kiorda vehivavy, amin'ny fifotorana amin'ireo ankizivavy mitàna basy, tena mbola mihoatra lavitra an'izany ny zava-mitranga any Rojava. Voalohany izao tao anatin'ny fiarahamonina Kiorda, ary ny tena marina, any amin'ireo fiarahamonina any atsinanana afovoany rehetra, ny hoe manana fahefana sy fitantanana be toy izao ireo vehivavy. Izay hanajàna azy ireo ho toy ny olona.
Singa fototry ny zava-miseho any Rojava sy ao Kiordistàna ny fiarovana ny vehivavy sy ny fahavitantenan'ireo foko vitsy an'isa. Iray amin'ireo fandrosoana miabo vitsy io, manoloana ilay fifandirana mahatsiravina ao amin’ny faritra, izay nahatonga hetsika tsy fitiavana vehivavy sy mirona amin'ny fotokevitra fanaovana hiringiriny.
Mbola mijanona foana ny fanontaniana hoe mety hahazo faka ao Mahabad ihany koa ve ny karazana hetsika toy izany, ary hanainga fanahy ho amin'ny hevitra hafa, tsy hevitra mikasika ny fitovian'ny lahy sy ny vavy fotsiny ihany, fa hetsika lehibebe kokoa ho an'ny voninahitra, ny rariny, ary mety hoe fahaleovantena ho an'ireo Kiorda ao Iràna.